ကုန်ကြမ်း Lorcaserin Hydrochloride hemihydrate အမှုန့် (856681-05-5) Phcoker
ကုန်ကြမ်း Lorcaserin Hydrochloride hemihydrate အမှုန့် ...... တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
SKU: 856681-05-5 အမျိုးအစား: အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု
ပျော်ဝင် ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသော 0.0709 မီလီဂရမ် / mL
Application Anti-အဝလွန်ခြင်းမူးယစ်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုကုန်ကြမ်း Lorcaserin Hydrochloride hemihydrate အမှုန့်။ ဒါဟာအစာစားချင်စိတ်စိတ်ကျရောဂါနှင့် serotonergic agonist အဖြစ်အခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်။
လှုပ်ရှားမှု၏ Lorcaserin Hydrochloride hemihydrate အမှုန့် (856681-05-5) ယန္တရား
Lorcaserin Hydrochloride hemihydrate အမှုန့်တစ်လျှော့ချ-ကယ်လိုရီအစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုထို့အပြင်အဖြစ် 30 သို့မဟုတ် သာ. ကြီး (အဝလွန်) ၏ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်း (BMI) နဲ့အရွယ်ရောက်အတွက်နာတာရှည်အလေးချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ကုသမှုများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအစတစ် 27 ၏ BMI သို့မဟုတ် သာ. ကြီး (အဝလွန်) နှင့်အဘယ်သူသည်ဤကဲ့သို့သောမြင့်မားတဲ့သွေးဖိအား (သွေးတိုး), သို့မဟုတ်မြင့်မားသောလက်စထရော (dyslipidemia) အဖြစ်အနည်းဆုံးအလေးချိန်-related အခွအေနေတိုနှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူအသုံးပြုရန်အတည်ပြုသည်။ သို့သော်လည်းအချို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိစေခြင်းငှါ။ အောက်ပါအတိုင်း: